ICabane Spa Le Charme, ubusuku obungaqhelekanga kufutshane neParis
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguAxelle
UAxelle unezimvo eziyi-73 zezinye iindawo.
UAxelle ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Iikhabhathi zabantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-2 abangaphantsi kweminyaka eyi-12.
Ikhabhinethi engaqhelekanga enejacuzzi yokuhlala entliziyweni yendalo. Ilungele izibini kunye neentsapho ezinabantwana abafuna ikhefu iyure enye ukusuka eParis kunye nemizuzu engama-30 ukusuka eDisneyland.
Yonwabela i-100% yamava endalo eBois de Rosoy: ichibi lokuqubha elishushu langaphandle ukusuka phakathi ku-Epreli ukuya ekupheleni kuka-Agasti, i-sauna, isilayidi kunye ne-swing yabantwana, i-barbecue, intenetya yetafile, i-pétanque, iitafile zepikiniki
Le khabhathi ibekwe emithini ikuvumela ukuba uphumle kunye ne-jacuzzi yayo yabucala kunye negumbi layo lokuhlambela elihle elinombono wehlathi.
Yonke into yenzelwe ukuhlalisa abantwana: iingcango zokhuseleko kwizitebhisi, imidlalo yokhuni kunye neencwadi, i-potty kubantwana abancinci.
Indawo yayo yokutyela ixhotyiswe nge-microwave, iimagi ezi-4 kunye neketile.
Ikhabhinethi ye-"Pod spa Le Charme" ibekwe kumbindi weBois de Rosoy, indawo yeehektare ezili-9 zeenkampu zehlathi.
Elifa lifanelekile kwikhefu lendalo lezibini, abahlobo okanye usapho. Ihlathi kuphela iyure eli-1 ukusuka eParis kwi-Pays de Valois.
Ungayonwabela imisebenzi ekwisiza (iphuli yokuqubha eshushu yangaphandle, i-sauna, ipiknikhi) kunye kufutshane (ukukhwela ihashe, ukukhwela iphenyane, iDisneyland Paris, iParc Astérix, iLa Mer de Sable, utyelelo lweshishini lotywala ...)
Umbuki zindwendwe ngu- Axelle
Sizibophelele ekwabelaneni nawe ngelifa lemveli lendawo kwaye sikunika iingcebiso zethu zokundwendwela ummandla. Ulwamkelo luvulwa ngentsimbi yesi-9 ukuya kweyesi-8.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rosoy-en-Multien